AMBATOBEVOHOKA… | NewsMada
Herinandro maromaro izay no efa nahenoana fa ho rava ity governemanta Solonandrasana Olivier ity, hatramin’izao anefa, tsy mety teraka izany governemanta vaovao izany. Misy anarana efa fantatra amin’izao fotoana izao, efa saika mahalala izany avokoa ny sasany amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta amin’izao fotoana, hatao solon’io praiminisitra io. Efa noresahina teto amin’ny gazety Free News ity resaka ity ary nilazana tamin’izay fotoana izay fa « ny filoham-pirenena amin’izao fotoana no tsy mahatapa-kevitra handrava ny governemanta misy amin’izao ».
Làlana tsy maintsy hizorany ato ho ato anefa izany fanovana governemanta izany. Azo heverina fa antony hampiakarana ny vidim-piainana misy amin’izao fotoana izany mba hilazany amin’izay fotoana izay fa noho ny olana mianjady amin’ny Malagasy dia nanapa-kevitra ny fitodrana fa handrava ny governemanta. Maninona anefa no andrasana hijaly ny vahoaka vao manapa-kevitra?, araka ny fandinihan’ireo mpandalina ny fiainam-pirenena, mampiavaka an-dRajaonarimampianina Hery ny fandraisana fanapahan-kevitra misalasala toy ny misy amin’izao sy ny efa nisy teo aloha.
Amin’izao fotoana izao, mipoitra avokoa io karazana olana isan-karazany io eny anivon’ny fiarahamonina eny ary saika efa isam-paritra mihitsy izany amin’izao fotoana izao. Vao tsy ela, tamin’ity faran’ny herinandro ity, nitokona ny mpitarika posiposy tany Toliara fa mandà ny fakan’ny kaominina 500ar isan’andro amin’izy ireo. Fitsaram-bahoaka etsy sy eroa miteraka tsy fandriampahalemana ho an’ny tsy mandady harona, sns… Miandry inona ary izany vao hanapa-kevitra ? Lasa ihany izay ny telo taona, niandry, efa sasa-niandry, ny vahoaka amin’ilay fiovana lehibe nampanantenaina. Tamin’izany fotoana, raha ny fampandriana adrisa natao, nanakaiky ny paradisa ny fitantarana an’i Madagasikara afaka taona vitsy monja. Amin’izao anefa, tsy paradisa no misy eto Madagasikara fa…
Ataon’ny olom-bitsy toy ny fiainan-tokatranony ny fitondrana ny raharaham-panjakana amin’izao fotoana izao ka rehefa te handray fanapahan-kevitra izy dia raisiny izany. Tsy mipetraka intsony ny hoe an’ny Malagasy i Madagasikara ary an’ny vahoaka ny fahefana. Mandeha avokoa ireo karazana fanabadoana rehetra handemena ny sain’ny vahoaka mba tsy hamantarany intsony ny heriny sy ny tanjany amin’ny fitakiana ny zony.